Reeffa Barataa Bantii Irranaa gara Finfinneetti yeroo geggessan, Naqamtee
Masteer pilaanii magaalaa Finfinnee fi magaalaalee addaa Oromiyaa misoomaan walitti-qindeessuuf wixiname, jedhame otuu hin raggaasisamiin hojii irra oolfamaa jira, kannaaf haa haqamuu, ilmaan Oromoo mormii kana irratti ajjeefaman, ka paartileen mormituu dhibba tokkoo ol ga’an jedhaniif mootummaan itti gaafatama haa fudhatu, kanneen hidhaman, akka paartiin mormituu jedhanitti kuma afurii ol ta’an haa hikaman, jechuudhaan walakeessaa baatii Sadaasaa tii kaasee mormiin Oromiyaa keessatti gaggeefamu har’as magaalaalee adda addaa keessatti itti fufee jira.
Hiriira Mormii Roobee, Oromiyaa
Gara walakkeessa baatii Sadaasaa tii jalqabee hiriirri mormii guutummaa Oromiyaa keessatti barattootaa fi uummataan geggeessamaa jiru kun, “Maaster Pilaaniin Finfinnee akka waan hin raggaasisamiinitti dubbatame iyyuu karaa adda addaa hojii irra oolfamaa jira. Labsiin fooyyaa’ina bulchiinsa magaalaalee Oromiyaa Caffee Oromiyaatiin bahes harka lafa jalaatiin karooricha hojii irra oolchuuf kan shirame” jechuun balaaleffata.
Hiriirri mormii guutummaa Oromiyaa keessatti geggeessamu kun tarkaanfii mootummaan “fudhadhe” jedhuun troban tokkoof ka gab jedhe fakkaate iyyuu torban dabre irraa jalqabee haala daran how’aa ta’een geggeessanaa jira, jedhu hiriirtonnii fi jiraattonni naannoolee Oromiyaa adda addaa.
Hiriira Mormii Hirna, Oromiyaa
Maater Pilaanii Finfinnee mormuutti dabalee “kanneen hidhaman haa hiikaman. Kanneen ajjeechaa raaw’atan seeratti haa dhihaatan” kanneen dhaadannoo godhachuudhaan, har’a, Harargee Lixaa, magaalaa Hirnaa, Baalee, magaalaa Roobetti, kaleessaa fi dheengadda immoo, Wallagga Bahaa, magaalaa Siree fi Hargaa Bahaa, aanaa Haramaayaa dabalee bakkawwan hedduutti geggeessamee jira - hiriirichi.
Wallagga Bahaa, magaalaa Naqamteetti kan argamu Yunivarsitii Wallaggaa keessatti ka barataa ture barataan tokko reeffi isaa bishaan naannawa Yunivarsitichaa jiru keessatti argamuu isaa ragaan Hospitaala Naqamtee irraa argamee fi hiriyoonni baratichaa ibsanii jiran.
Oromootii,UK Londonitti hiriira bahanii waajjira amuummee ministera Biritish duratti shaamaa qabsiisaa achuma buluun nama hiriira barattota Oromiyaa irratti lubbuu dhabe yaadatan.
“Ajjeechaa, hidhaa fi gidiraa Itiyoophiyaa keessatti Oromoo irratti geggeessamu haa dhaabatu!” jechuun kanneen morman – Oromoonni magaalaa London keessa jiraatan immoo BBC fuul duratti hiriira ba’anii, xalayaa isaanii embaasii Keenyaatii fi waajira Muummicha-ministaraa Biriteenii galfatan.
Hiriiraa fi waajjira muummee ministera fuul dura buluun guyyaa sadiif tura; Ammajii, 5,6,fi 7.Ammajii irratti magaalaa keessa yaahuun hiriira bahan,galgala galgala garuu waajira Muummicha ministara Biriteyin Deevid Kaameroon fuul-dura buluun shaamaa qabsiisan.
Akka itti gaafatatmuun dubaratoota Oromoo London aaddee Addisee Dheeressaa jettutti shaamaa qabsiisuun Oromoota lubbu dhaban yaadachuu fi hujiin isaanii bara baraan akka jiraatu agarsiisa.Hiriira kana hawaasa waldaa dubartootaa magaalaa Londoniitti qopheesse.
Yaadawwan Ilaali (191)